समाज – Rabin's Blog
राजस्थानको राजधानी जयपुरमा यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ । यहाँ महिलाले ससुरासँग अवैध सम्बन्ध बनाइ आफ्नै श्रीमानको हत्या गरेकी छिन् । यहाँ रियलस्टेटको व्यवसाय गर्ने मुकेश सैनीको हत्याको आरोपमा प्रहरीले उनकी पत्नी पूजा सैनीलाई पक्राउ गरेको छ । यसअघि प्रहरीले मुकेशका काका राकेश सैनी र उनका नाबालिग छोरालाई पनि पक्राउ गरेको
राजधानीको बसुन्धरामा गुल्मीकी एक युवतीलाई आफू डेरामा बस्दैं आएको घरबाट घरधनीले सोही दिन घर छाड्न उर्दि जारी गरे ।बसुन्धाराकै एक कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययानरत ती युवतीलाई घरधनीले एकैदिनमा कोठा छाड्न भनेपछि उनी निक्कै तनावमा थिइन् । उनको अनुहारमा स्पष्ट देखिने तनावका कारण सुरुमा स्थानीय छिमेकीले समेत एक महिला विद्यार्थीलाई
मेरो नाम सबिन हो । म काठमाण्डुको पकनाजोलमा बस्छु । मेरो पेसा सैनिक भएकोले बिहान सबेरै अफिस जान्थे । एक दिन शनिबार नुहाएर कौशिमा बसिरहेको थिए, पल्लो घरको घरबेटी दिदी नुहाइरहेको देखे । त्यो दिदीको घर भन्दा म बसेको घर अग्लो भएकोले मैले सबै कुरा देख्ने अबसर पाए । त्यो
तपाईं एउटा खुट्टा को भरमा मात्र कति समय उभिन सक्नु हुन्छ दस मिनेट वा बीस मिनेट ?, अथवा के के काम गर्ने सक्नु हुन्छ एउटा खुट्टा को भरमा नाच्न वा पैडी खेल्न। सायद तपाईले कोशिस गर्ने पनि सक्नु भएको छैन होला, किनकी तपाई सपाङ हुनुहुन्छ, जब एउटा ब्यक्ति सपाङबाट अपांग
Buletin Post July 16, 2018 समाज	0
पहिरनले मानिसको व्यक्तित्व झल्किन्छ । विशेषगरी दक्षिण एसियामा अझ मुस्लिम महिलाले त निकै लामा पहिरन लगाउँछ । लामो लगाउन भनिन्छ पनि । मुस्लिम महिलालाई लामो र पूरै शरीर ढाक्ने पहिरन (पोशाक) लगाउन अनिवार्य गरिएको छ । अहिल पनि मुस्लिम महिला बुर्का (मुख छोप्ने विशेष प्रकारको कपडा) लगाउँछ । आफ्नो धर्ममा प्रचलित
तुलसीपुरकाे एउटै हाेटेलबाट समातिएका २५ जना भारतिय के गर्दै थिए? यस्तो रहेछ कारण… हेर्नुस्
Buletin Post July 12, 2018 समाज	0
दाङ असार, २८– दाङको एक होटलबाट २५ भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्ल । दाङको तुलसीपुरस्थित एक होटल मुनाल पाहुना घरमा विग एक सातादेखि बस्दै आएका २५ जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेको दाङ प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूबाट मोबाइल सेट र ग्याँस चुल्होहरू बरामद भएको गरिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको
अाँप बोकेर माता सविताकाेमा पुगेका दिल निशानी मगरकाे अायो यस्तो खबर – भिडियो
Buletin Post July 11, 2018 समाज	0
सबिता सरु शर्मा आचार्य २०४५ सालमा धनकुटामा जन्मिनु भएको हो। उहालाई ७ वर्ष को उमेर देखि नै अलौकिक शक्तिको ज्ञात भएको हो। माताका वाणीहरु, मानिसले घमण्ड र रीष गर्न छाडौ ऑफै ऊन्नति र प्रगति हुन्छ, हरेक मानिसको जीवन जिउन साँच्चै काहां सजिल छ र? एक न एक तनाव ले सधै
इटहरीबाट अायो सबैलार्इ रूवाउने यस्तो दुःखद खबर
इटहरी । बालिकाको हत्या गरेको आरोपमा इटहरी–१ माझी टोलकी १७ वर्षीया उमा माझी लिम्बुलाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । असार १ गते अर्जुन लिम्बुकी ६ वर्षीया छोरी अपेक्षा लिम्बुको उनले हत्या गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । खाना खाएर सुतेकी अपेक्षा असार २ गते कोठामा बेहोस अवस्थामा फेला परेकी थिइन्
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यवस्था नाजुक, मृत्युको मुखमै पुगेपछि…
Buletin Post July 11, 2018 July 11, 2018 समाज	0
जुम्ला/काठमाडौं : रगतमा म्याग्नेसियम र चिनीको मात्रा घट्दै जाँदा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मुुटुको चालमा गडबडी देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा जटिलता थपिंदै जाँदा हृदय गति बन्द हुन सक्ने खतरा चिकित्सकहरूले औंल्याएका छन्। डा. केसीको रगतमा चिनीको मात्रा कम हुँदै गएको र उनले ग्लुकोज लिन समेत नमानेकाले अहिले ग्लुकोज नभएका अन्य